Maninona ny fonja no manolo ny famangiana amin'ny antso an-tsary? -News-Yuyao Xianglong Communication Industrial Co., Ltd.
Fa maninona no manolo ny fangalarana valiny amin'ny antso an-tsary?
Fotoana: 2020-08-12 Hits: 9
Tao anatin'izay taona lasa izay, mihamaro hatrany ny fonja nampiditra serivisy fiantsoana horonan-tsary.
Raha teorika ireo vokatra ireo dia mety hanamora ny fifonan'ny voafonja ny fifandraisan'izy ireo amin'ny fianakaviany sy ny namany any ivelany.
Ny fanadihadiana natao hatrany dia mampiseho fa ireo voafonja misy fifandraisana matetika amin'ny any ivelany dia azo inoana fa tsy hanao fihetsika mety hanimba ny famotsorana azy ireo mialoha. recidivism. Ary koa, namana sy fianakaviana maro no tsy mipetraka eo akaikin'ny toerana misy azy, noho izany ny fitsidihana eny an-toerana dia mety ho lafo, manelingelina ary tsy mahazo aina. Amin'ny fitsidihana horonan-tsary lavitra, ny namana sy ny mpianakavy dia afaka manana fifandraisana manokana amin'ny fampiononan'ny tranony manokana. Ny fitsidihan'ny olona manokana dia mitaky fanaraha-maso mpiasa bebe kokoa — na ny fanaterana ireo voafonja mankany amin'ny efitrano fivahinianana ary ho azo antoka fa tsy misy tanana manova tanana mandritra ny fitsidihana. Noho izany, ny fifindrana amin'ny famangiana horonantsary dia afaka mamonjy vola any am-ponja mifono vola.
Fa ny tranomaizina koa dia mahazo tombony bebe kokoa amin'ny famerana ny famangiana ataon'ny olona. Na dia maimaimpoana aza matetika ny fitsidihana horonantsary eo an-toerana, ireo orinasa manome ny rafitra amin'ny ankapobeny dia manolotra serivisy fiantsoana vidéo an-tranonkala an-tranonkala ihany koa. Ary ny fonja dia mahazo ampaham-bola marobe amin'izany vola izany.
Amin'ny maha-mpamatsy fitaovana finday azo antoka sy indostrialy an'izany telefaona finday, switch hook, ary keypad. Ny ampaham-telefaona Xianglong dia naparitaka amina fonja 300 mahery manerana an'izao tontolo izao. Raha te hahalala bebe kokoa momba anay, dia tongasoa ato an-tsaina!
Taloha: 16 Ketsika Stainless steel Keypad napetraka ao amin'ny Tetikasa Kabinetra Parcel
Next: Nasiana tombo-kase an-trano miorina amin'ny toetr'andro miorina amin'ny alàlan'ny fanaraha-maso nomerika fanaraha-maso metaly